चिन्तन चौतारी: खुशी नै खुशीको पल
थाहा छैन खै के लेखु ! मेरो विचारमा शुरुमै सुन्दर शब्दहरुको उत्तर मैले धन्यवाद बाट नै दिनु बेस होला । धेरै धेरै धन्यवाद । यो मेरो भित्री मुटुको आवाज हो । शब्दहरु हराएको छु, सोचेको कुरा पनि लेख्न नसकेर अल्मलिरहेको छु, शायद लेख्ने मेरो पेशा नभएर हो वा यस्तो अवस्थालाई सजिलै फेस गर्न नसकेर हो । कसरी लेख्ने रे के लेख्ने भन्ने पनि थाहा छैन । तोलाइरहेको पनि छैन, बरु अतालि रहेको छु क्या र !
मैले ब्लग लेख्न शुरु गरेको पनि आज ठ्याक्क एक महिना पुगेछ । ब्लग लेख्न थालेको भरखर जस्तो पनि लाग्छ, धेरै समय भएको जस्तो पनि लाग्छ । एक महिना धेरै लामो समय पनि हो र एकदम छोटो समय पनि । जब मैले ब्लग लेख्न शुरु गरेको थिएँ, मलाई अरु कुराको कुनै ख्याल थिएन । सोचेको थिएन, मैले यती धेरै प्रतिकृया पाउछु भनेर, त्यो पनि सबै सकारात्मक । मैले त मात्र सोचेको थिएँ, मलाई लागेका कुरा लेख्छु । हो, केवल लेख्छु र लेखिरहन्छु ।
मैले पहिले पनि लेखेको थिएँ, मेरो ब्लगमा त्यस्तो कुनै नयाँ समाचार हुनेछैन, ज्ञान गुणका कुराहरु हुनेछैन, भाषा साहित्यका पवित्र खुराक पनि पस्किन सक्ने छैन । शिकारु हुँ, सके सुध्रिदै जान्छु नत्र स्वतन्त्र रुपमा सिक्न र रमाउनकै लागि ब्लग खोल्ने बिचार गरेको थिएँ । म यसमा आफुलाई लाग्ने जुनसुकै कुरा पनि लेखिरहन्छु किन कि आफ्नो ब्यग्तिगत शोख पुरा गर्न भनेर नै यो ब्लगको न्वारन गरेँ । आजको ठीक एक महिना अघी मसँग नभएका धेरै चिज अहिले आएर भेटाएको छु । कती त नयाँ साईनो पनि गासेको छु । ब्लग मुटु भएकोछ भने फेसबुक टेक्ने खुट्टा अर्थात आधार भएको छ । धेरै त मेरा फेसबुक मित्रहरुले भिजित गर्नु भएको होला र कमेन्ट पनि उहाँहरुकै बदी पाएको छु । सबै जनाले मलाई खुब माया गरेर फुर्काइ रहनु भएकोछ । मेरो ब्लगमा प्रतिकृया दिनेमा नरेन्द्र र गोपाल दुई जना मात्र हुन जो सँग मेरो प्रत्यक्ष चिन्जान र साथीको नाता छ, अरु त सबै ब्लग र फेसबुकले जुराइदिएका मित हुन । कहिल्यै नभेतेर, नबोलेर पनि कती नजिक छौ, कती बुझ्न सक्छौ एक अर्कालाई । यती छोटो समयमा यती धेरै साथीहरु निस्वार्थ माया सहित पाएकोमा आफ्नो भाग्यमाथि गर्व गर्नै पर्छ । अहिले मैले यो लेखिरहदा सम्म मेरो ब्लग प्रबेश गर्ने साथीहरुको सन्ख्या ९६९ पुगी सकेको रहेछ जुन प्रती दिन ३२ जना भन्दा बदीको आगमन हो । यसले म थप उत्साहित भएकोछु । आशा छ, मैले सधैं यस्तै माया पाइरहनेछु । बिभिन्न मुलुकमा रहनु हुने परिचित मित्रहरु मात्र नभएर अपरिचित मित्रहरुको आगमन पनि धेरै भएको पाएको छु । यसर्थ म अझै उत्साहित भएको छु ।
मैले मेरो ब्लग यात्राको बधाई र सफलताको शुभकामना दिने साथीहरु प्रती समर्पित गरेर उहाँहरुको प्रतिकृया जस्ताको त्यस्तै राखेकोछु । कसै कसैको अङ्रेजी वाक्यहरुलाई मात्र नेपालीमा उल्था गरेर नेपालीमै लेखिदिएको छु । अरु शिर्षकका प्रतिकृया समाबेश गरेको छैन, यो त केवल मेरो सानो प्रयासमा खुशी हुदै शब्दपुष्प ओइर्याउने साथीहरुको मात्र हो । उहाँहरुको यती धेरै सद्भाव र मायाले मलाई कहिल्यै थकित हुन दिने छैन भन्ने विश्वाश लिएकोछु । उहाँहरुको आश र भरोशा कुनै दिन तोद्ने दुस्प्रयास गरे भने मलाई जस्तो सुकै कठोर सजाय दिन सक्नु हुनेछ । म यि अमुल्य शब्दको ब्याज ठानेर चुपचाप सहिदिनेछु । एक महिनाको मेरो उपलब्धी यही शब्द हुन, मित्र हुन, आँफै जोडिएको साईनो हुन ।
बधाई छ चन्द्र जी, भान्जीको जन्ममा र ब्लग शुरुवातको !
भान्जीलाई स्वस्थ, सफल र दिर्घायु जीवनको शुभकामना !
ब्लगमा निरन्तरता र सफलताको शुभकामना !
- बसन्त, जापान
Happy birthday to your bhaanji and blog too. मैले तिम्रो सबै लेखहरु पढें । तिमीले लेखेका लेखहरु अति नै सान्दर्भिक छन्, साथै लेखन शैली पनि मन पर्दो छ । आशा छ, भबिश्यमा तिमी एउटा 'बेस्ट डाक्टर र राइटर' को रुपमा चिनेनेछौ । Waiting for next. Best of luck .
- नरेन्द्र यादव, सप्तरी
लौ ब्लग संसारमा तपाईलाई स्वागत छ है - अनि प्रगति गर्दै जानुहोस शुभकामना छ ।
- बेदनाथ पुलामी, कतार
लु बधाई अनि शुभकामना छ चन्द्र जी तपाईलाई, ब्लगर हुनुभएकोमा । मलाई त अरु केही भन्नै आएन । Happy blogging..
- कैलाश राई, नेपाल
निकै खुशीको कुरा । धेरै पछी तिम्रो केही पढ्न पाइयो शायद आँफै नयाँ टेक्नोलोजीसँग अभ्यस्त हुन नसकेर होला । whatever you are doing that’s wonderful.
- गोपाल गुरुङ, BPKIH, धरान
Glad to read your blog . I always try to be with young generation. We need doctors with research orientation not of money motive. आजकाल मौसम परिवर्तनले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेर ठुलो चुनौती दिइ रहेको छ । यसको सामना गर्न सक्षम भन्नु होला । अनी ब्लग यात्राको लागि with regaards, all the best .
- पूर्वमन्त्री गणेश शाह
कर्म क्षेत्र फरक भए पनि आखिर भावनात्मक धरातल उही हो । म विश्वाश गर्दछु, मान्छेलाई तपाईं शारिरिक र भावनात्मक रुपमा चिर्न र सिउन सिपालु बन्दै हुनुहुन्छ । कलमहरु तिखारिदै जाउन अनी मसीहरु थपिदै.... शुभकामना चन्द्र जी लाई ।
- के. बि. चाम्लिङ राई
Got through your blog है.... मान्नै पर्छ, how you manage time to update those stuffs ??? त्यो पनि नेपालीमा.. great....
- रिया थापा, अमेरिका
I went through your blog. I really appreciate you n your talent. तपाईंको दृष्‍टिकोण र लेख्ने तरिका अनुसार तपाईं अरु केटा मान्छेहरु भन्दा धेरै कुरामा फरक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, जुन निकै उत्कृष्ट छ । म यत्ती भन्न चाहन्छु, भगवानले तपाईंको भाबी दिनहरुमा सफलता र धेरै खुशी मात्र दिउन । उज्वल भबिश्यको कामना ।
- हिमा पुन, नेपाल
फेसबुकमा नै भेटिएका र सधैं प्रोत्साहन गरिरहने मित्रहरु अनुकुल प्रकाश, कृष्ण पुर्जा, सन्तोष परियार, देवदास पाटा मगर, निश्प्रभ सजी, दुर्गा खरेल, सोनिया भण्डारी, सागर पाठक, रेनु गुरुङ, अशोक पार्थिव तामाङ,, डा. रबिन्द्र पाण्डे, गिर रोदन, राजन पाण्डे, दिपक परियार 'दिपशीखा', तिब्बत दर्लामी, मदन तामाङ,, सुमी के.सी., मनोज मगर लगायत सम्पूर्ण मित्रहरुको पोजेतिभ प्रतिकृया प्रती म सधैं ऋणी नै रहनेछु ।
प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष सधैं लेख्न उक्साउने दाजुहरु नबिन बिभास र राम कुमार श्रेष्ठ तथा दिदीहरु रमा गौतम र माया थापा मगरको प्रोत्साहन कैहिल्यै बिर्सनै हुँदैन ।
दिनहु मेरो ब्लग पढेर मौखिक सल्लाह दिइ रहने साथी सन्तोष र ब्लग संसारका नयाँ कुराहरु खोतलेर प्रयोग गर्न सुझाव दिने साथी रिबेशको गुण अतुलनीय छ । नाम उल्लेख भएका या नभएका सबै मित्रहरु प्रती आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, सबै मित्रहरुले मेरो गल्ती खोजेर आफुलाई सुधार्ने र सच्चिने बाटो पनि देखाइदिनु होला । अहिलेसम्म एउटै पनि त्यस्तो कुनै सुझाव दिनु भएन । यदी मभित्रको म यत्तिकै भुलिरह्यो भने सिर्जिन खोजेको पनि बिलिन भएर जानेछ । बिगत एक महिनादेखी मैले आर्जेको महँगो धन भन्नु नै तपाईं सबैको ममता हो । मसँग त सिर्फ धन्यवाद र धन्यवादको अभिब्यक्ती बाहेक केही पनि छैन । मैले आँफैलाई प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । अब म जे छु, त्यही नै म हुँ । म जती छु, त्यती नै तपाईंहरुको हुँ । मेरो ब्लग यात्राको एक महिने यात्रीहरु पछी पछी सम्म र सधैं सधैंलाई सँगै रही रहौ भन्ने कामना सहित मेरो एक महिनाको ब्लग यात्रा तपाईंहरुले अति नै सुखद बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरुको शब्द केवल शब्द मात्र हैनन यि त माया हुन, विश्वाश हुन , आशा-भरोशा, प्रोत्साहन, सबै हुन मेरो लागि । धन्यवाद सबैलाई ।
Posted by Chandra Magar at 9:25:00 PM
Yumesh Pulami August 22, 2009 at 4:01 AM
चन्द्र जी उतर उतर प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दछु, यसरि नै आफ्नो कुराहरु share गर्दै जानुहोस !
लेख्ने पेशा नभए पनि यतिविध्न कुराहरु कति मज्जाले सरर लेख्न सक्नु भएको छ अनि भेट घाट नभएको मित्रहरु संग यसरि नै आत्मियता गास्न पाउनु नै ब्लगिङ्गको राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ मलाइ त !
लेखाइ हरु पोस्ट गर्दा Labels राखेर पब्लिस गर्नु भए राम्रो हुनेथ्यो |
narendra yadav,badgama-1,saptari August 23, 2009 at 10:45 AM
sathi chandra sabbhanda pahile timro blug ek mahina ko yatra pura garteko ma hardik badhai chha,sathai timro blug ko uttorttor pragati ra dirghayu ko kamna gardachhu.
Chandra Magar December 25, 2009 at 12:23 PM
बेद जी, धेरै धेरै धन्यवाद । हाम्रो भेट प्रत्यक्ष्य नभए पनि एक अर्काका लागि नौलो र अपरिचित रहेनौ । तपाईंहरुको सल्लाह सुझाव मैले अबश्य मनन गर्नेछु । अबदेखी म त्यसै गर्न थालेकोछु । भबिश्यमा यस्तै थप अरु सल्लाह र सुझावको आशा राख्दछु ।
अनी साथी नरेन्द्रलाई मुरी मुरी धन्यवाद ।